Archive du 20181203
Ravalomanana kandidan’ny Malagasy Totoafo ny fanohanana azy
Manao ranolava ireo mpanao politika, olon-tsotra, mpandraharaha, tompon’andraikitra ambony teo aloha , kandida tsy tafita tamin'ny fihodinana faharoa, nihaona tamin'ny Kandida Marc Ravalomanana teny amin’ny Foiben-toeran’ny K25 eny Bel’Air Ampandrana ny faran’ny herinandro teo.
Mampitandrina i Rivo Rakotovao “Tsy tetezamita izao ka hoe samy manao izay tiany”
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena somary mafimafy dia naneho ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao ka nilazany fa ao anatin`ny kihon-dalana lehibe i Madagasikara, indrindra amin`ny fanehoan`ny vahoaka ny fahefany amin`ny alalan`ny fifidianana.
Fifidianana fihodinana faharoa Hanao fanambarana goavana ny MFM anio
Mivory eto Antananarivo ny “Comité Directeur National”-n’ny antoko MFM (Birao foibe) tarihin'Atoa Manandafy Rakotonirina nanomboka omaly sy anio 3 desambra.
Dany Rakotoson “Miha matotra ny firenena.”
Fampisehoana fa efa miha matotra sy vonon-kiroso amin’ny fivoarana ny firenena no azo amakiana ny zava-mitranga nisy teto amin’ny firenena nandritra iny fihodinana voalohany tamin’ny fifidianana iny, hoy ny
Marc Ravalomanana Nangata-tsodrano tamin’i Thérèse Zafy
Henoko fa tsy salama izy dia nankaty aho namangy azy niaraka tamin’ny Profesora Manoro Regis sy Dr Joseph Randriamiandrisoa satria nisy fifandraisana akaiky izaho sy Pr Zafy Albert, hoy i Marc Ravalomanana
Gidragidra teny Antanimena Adin’ny samy olon’ny MAPAR
Ny sabotsy 2 desambra lasa teo tamin`ny 5 ora sasany maraina manakaiky toeram-pialamboly iray tetsy Antanimena no nitrangana famonoana sy fandrahonana olona.
Minisiteran`ny raharaham-bahiny Mandamina ireo mpiasany any ivelany
Efa miroso amin`ny fandaminana ny amin`ny fampodiana an`ireo mpiasa eo anivon`ny kaonsila (consulat) sy masoivoho any ivelany ny eo anivon`ny minisiteran`ny raharaham-bahiny amin`izao fotoana.
Vazo kanto ho an’i Dada Efa miketrika ry Bodo,Shyn, Stefanie, Black Nadia, Tence Mena…
Tsy ny mpanao politika na mpandraharaha na fikambanana sy vondron’olona ihany no tapa-kevitra fa hitondra ny anjara birikiny hanohana ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana amin’ny fihodinana faharoa fa eo ihany koa ireo mpanakanto.
Fenoarivo Atsinanana Nahazo fitsarana ambaratonga voalohany
Notokanana ny sabotsy 1 desambra lasa teo ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Fenoarivo Atsinanana, Faritra Analanjirofo.
Tsarain’ny toetrany eny ihany e !
Iray i Madagasikara ary samy Malagasy avokoa no fiantso ny vahoaka ao anatiny na avy any Atsimo na Avaratra na Atsinanana na Andrefana.
Sekoly ambony ENS Namoaka mpampianatra matihanina 258 isa
Namoaka mpampianatra 258 mianadahy ny sekoly ambony ENS etsy Ampefiloha. Ny 194 amin’ireo no notolorana ny mari-pahaizana licence misalotra ny anarana Tafaray raha nahazo ny master –pro kosa izany hoe :
Aretina SIDA Vitsy ireo manao fitiliana
Manodidina ny 0,3 % ireo olona lasibatry ny aretina SIDA eto Madagasikara raha 37 tapitrisa maneran-tany.
CHRR Mère-Enfant Ambatondrazaka Nahazo fotodrafitrasa sy fitaovana vaovao
Afa-pahasahiranana tanteraka ny vahoaka ao Ambatondrazaka, ao anatin`ny faritra Alaotra Mangoro, indrindra ny renim-pianakaviana sy ny zaza satria nahazo hopitaly manokana misahana ny reny sy ny zaza (Complexe Mere-Enfant).
Sempotry ny “Gilets Jaunes” i Frantsa Miha mafy ny gidragidra, 263 no naratra
Nitarika fivoriana maika tao amin’ny lapan’i Elysée noho ny hetsika miha mahery vaika ataon’ny “Gilets jaunes” ny filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly alahady 2 desambra antoandro.
Asa sosialy eny Atsimondrano Nitsangana ara-ofisialy ny Fikambanana Tsiorintsoa
Manampy ny mpiara-belona no antom-pijoroan’ny Fikambanana Tsiorintsoa eny Antananarivo Atsimondrano, tarihin-dRamatoa Nofy Lalaina Haingoharijaona.